မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Fugitive : Plan B နဲ့ Daniel Henney
ခု ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် Rain Bi ရဲ့ Fugitive : Plan B ဆိုတဲ့ကားကို ပြသနေပါတယ်... စကာင်္ပူမှာလဲ ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး ည ၉နာရီခွဲတွေမှာ Starhub cable ကိုရီးယား channel မှာ ပြသနေပါပြီ... ဟိုနေ့က အလုပ်ကပြန်ရောက်တော့ ဘာရယ်မဟုတ် တီဗွီမှာလာနေလို့ ၀င်ကြည့်လိုက်သေးတယ်... Rain က ဂျိမ်းစပွန်းလောက်တော်နေပြီး ပေါတောတောနဲ့ သရုပ်ဆောင်တယ်.. အစထဲက ကျွန်မက Rain's fan မဟုတ်တော့ သူ့ကြည့်ရတာ ပေါတောတောပဲ မြင်တယ်...(No offend to Rain's fan)... ဇာတ်လမ်းကတော့ မင်းသမီးက သူ့မိဘတွေလားဘာလား ကို သတ်သွားတဲ့သူကို ကလဲစားခြေဖို့ Rain (secret agent) ကို ငှားတယ်ပြောတာပဲ... လျှို့ဝှက်ချက်တွေများလွန်းလို့ နားတောင်မလည်ဘူးလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာလဲ ကြားတယ်... ကျွန်မကိုယ်တိုင် စလည်ဆုံးမကြည့်ဖူးသေးတော့ မသိဘူး....
ဒါပေမဲ့ အစက အဲဒိကားကို ကြည့်မယ်လို့ ကျွန်မဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်... ခုလဲ ကြည့်ဖြစ်အုံးမယ်ထင်ပါတယ်.... ဘာလို့လဲ သိချင်လား... ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒိကားမှာပါတဲ့ ဒုတိယမင်းသားလို့ပဲ ခေါ်မလား... Daniel Henney ကြောင့်ပါပဲ... ကျွန်မက Daniel Henney ကို အရမ်းကြိုက်လှတယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူး... မကြိုက်ဘူးလဲ မဟုတ်ပါဘူး... ချောတယ်... အင်္ဂလိပ်နဲ့ ကိုရီးယား စပ်ကျထားတော့ ပုံစံက အင်္ဂလိပ်ရုပ်ပေါက်ပြီး... သူပါတဲ့ကားတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ သဘောကျတယ်... (စပိုင်ချစ်သူကားက မင်းသားနဲ့ မမှားလိုက်ပါနဲ့.. သူက My Lovely Sam Som ထဲမှာ ဒုတိယမင်းသမီးနဲ့ ပေါင်းတဲ့ တစ်ယောက်ပါ)...
He and His dog, Mango
Daniel Henney ကို သိပ်မကြိုက်ပဲ ဘာလို့ သူ့ကြောင့် ကြည့်ချင်ရတာလဲဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်... ကျွန်မလဲ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် ကိုရီးယားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တွေ လျှောက်ဖက်ရင် ကျွန်မသဘောကျတဲ့ အနုပညာသမားတွေရဲ့ Official facebook တို့ Twitter တို့ဆို အက်ထားလေ့ရှိပါတယ်... အထူးသဖြင့် Facebook လို Imposer တွေ များတဲ့ နေရာမှာ ဒီအကောင့်ကဖြင့် မင်းသားအစစ်နဲ့ သူ့အဖွဲ့သားတွေ စီမံတာ သေချာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းခိုင်လုံရင် သွားအက်ထားပါတယ်.... လီမင်ဟိုနဲ့ Daniel Henney မှာ official facebook ရှိပါတယ်... (ကြားဖြတ်ပြောကြားချက်... Jang Keun Suk နဲ့ G-Dragon မှာ official facebook or twitter လုံးဝမရှိပါဘူး... ရှိတာတွေက fan တွေလုပ်ထားတာပါ) ... ဒါနဲ့ like သွားလုပ်ထားတော့ သူ့ update လေးတွေရှိရင်လဲ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်...
သူ့ facebook ကို တခြား ကိုရီးယားမင်းသားတွေ facebook ထက်ပိုပြီး သဘောကျတာက... သူက အင်္ဂလိပ်လိုရေးလို့ပါ... သူက status ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစထဲက အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးပါတယ်... ဒီတော့ ကိုယ်သူ့ကို ပြောချင်ရင်လဲ အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရလို့ သဘောကျတာပါ... Fugitive ကို ရိုက်ကူးနေတုန်းကလဲ လက်ရှိ အခြေအနေမှန်သမျှကို update လုပ်တဲ့ status လေးတွေ... ရောက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ ရိုက်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ သာမာန် ပုံလေးတွေကို တင်တတ်ပါတယ်.. Fugitive စပြခါနီးတနေ့တော့ သူ့ စတေးတက်စ် မတ်ဆေ့မှာ Fugitive ကို ကြည့်ကြဖို့ သူ့ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်... သူပါလို့ ကြည့်ကြပါ... အားပေးကြပါတဲ့... အဲလိုလေးတွေ့တော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ သဘောလဲကျတယ်... သနားသလိုပဲ... အားလဲ ပေးချင်တယ်... သူ့ဖေ့ဘွတ်မှာ သူကျွန်မကို မသိပင်မဲ့... သူအဲလိုလေးပြောလိုက်တာ သူ့စိတ်ကို ကျွန်မခံစားလို့ရတယ်.... တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်... ကျွန်မကို ပြောလိုက်သလိုပဲ ခံစားရတယ်... ဒီမှာပဲ ကျွန်မခေါင်းထဲမှာ... "အော်... ငါ သူ့အတွက် ကြည့်ပေးရမှာပါလား" လို့ ဖြစ်သွားတယ်... ဟီး.. ဟီး...
သူ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ သူနဲ့ သူ့အဖွဲ့သားတွေက fan တွေကို မပျင်းရအောင် ပြိုင်ပွဲလေးတွေလုပ်ပေးတတ်တာလဲ တွေ့ရတယ်... ဥပမာ... ဟိုတစ်ခေါက်ကဆိုရင် Daniel Henney ကို super Hero ၀တ်စုံနဲ့ photoshop ပြိုင်ပွဲလေးလုပ်တယ်... fan တွေက ဆွဲပြီးပို့... like အများဆုံး vote အများဆုံးရတဲ့ သူကို Daniel က လက်ဆောင်ပစ္စည်းလှမ်းပို့ပေးတယ်.... ကဲ နွေးထွေးမှု မရှိဘူးလား.. သူ့ ပရိတ်သတ်ကို သူဂရုစိုက်တယ်... ဘာရယ်တော့မဟုတ် ၀င်တော့ ပြိုင်ချင်သား... Photoshop က မတတ်... ခက်ရော...
နောက်ပြီး သူ fugitive ရိုက်နေတုန်းက သူ့ script တွေကို မနက် ၃နာရီအထိ သူနဲ့ သူ့ မန်နေဂျာနဲ့ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်မှာထိုင်ပြီး လေ့ကျင့်နေတဲ့ ဗွီဒီယို အတိုလေးကို တင်ထားတယ်.... သူ့ခမျာ ကိုရီးယားလို ကောင်းကောင်းမတတ်တော့ script က ၂ ခုနဲ့... တစ်ခုက ကိုရီးယားလို တစ်ခုက အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ လေ့ကျင့်ရတယ်... သူ့မန်နေဂျာကလဲ တော်တော်လေးတော့ သူ့ကို ဂရုစိုက်ပုံရပါတယ်.. သူနဲ့ တူတူ မနက် ၃နာရီထိ တူတူလေ့ကျင့်တယ်... Daniel က "Welcome to My life" ဆိုပြီး script လေး ၂ ခုကို ထောင်ပြပြီး သူ့ အခက်အခဲတွေကို ပြုံးပြုံးလေး ပြောပြသွားတယ်... တော်တော်လေးကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ... အဲဒိဗွီဒီယိုကတော့ facebook မှာ တင်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်မ ဒီမှာ ပြလို့မရပါဘူး.. သူ့ဖေ့ဘွတ်ကို သွား like လုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ... သူ့ fan အရေအတွက် တိုးရင် သူလဲ ၀မ်းသာမှာပါ... ဒါကတော့ သူ့ official facebook ပါ... http://www.facebook.com/danielhenney
More Photos at his official facebook...
ဒီအောက်က ဗွီဒီယိုလေးကတော့ သူ့ fan တွေ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ random မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သူက video response နဲ့ ပြန်ဖြေထားတာပါ... သင်တို့လဲ Denial ကို မေးစရာရှိရင် သူ့ဖေ့ဘွတ်မှာ မေးနိုင်တယ်နော်....
Posted by mabaydar at 12:36 AM